I-PB2000V-PB6000V yangokwezifiso Umshini wokubumba umshini womkhiqizi nomhlinzeki | I-Dongshen
Okuqhubekayo kwe-Preander expander
Iqoqwana Phambi kokuxhuma
Air Ukubandisa Block Molding Machine
Umshini Block Molding Machine
Ashintshekayo Block Molding Machine
EPS Umumo Molding Machine
Umumo Molding Machine nge Umshini
Amandla Ukulondoloza Uhlobo Lomumo Wokubumba Umshini
Central Umshini System
Umshini Wokusika we-EPS
Umshini Wokusika Ishidi we-EPS
Umzila we-EPS CNC
Umzila we-Eps Machine-Eps
Isikhunta se-EPS nezinsiza
Iphrojekthi ye-EPS Raw Material
Izinsiza ze-EPS Raw Material
DS1100-FDS1660 EPS Iqoqwana ty ...
I-SPY90-SPY120 Okuqhubekayo Okuqhubekayo ...
PB2000V-PB6000V Umshini uhlobo ...
PB2000A-PB6000A Ukupholisa komoya ...
I-PB2000V-PB6000V Umshini wohlobo lomshini wokubumba wokuvimba
EPS Umshini Block Molding Machine kuyinto umshini esebenza kahle EPS ukwenza EPS amabhlogo. Amabhulokhi e-EPS angasikwa kumashidi okufakwa endlini noma ukupakisha. Imikhiqizo edumile eyenziwe ngamashidi e-EPS ngamapaneli wesangweji e-EPS, amapaneli e-3D, amaphaneli wokuvikela odongeni angaphakathi nangaphandle, ukupakisha ingilazi, ukupakisha ifenisha njll.
Umshini wokubumba we-EPS Umshini wokubumba ungakhiqiza amabhlogo we-EPS aphezulu, asebenze ngomjikelezo osheshayo, futhi wonke amabhlogo aqondile futhi aqinile futhi anomswakama wamanzi aphansi. Umshini ungenza futhi amabhlogo wokuminyana aphansi ngekhwalithi enhle. Kungenza ukuqina okuphezulu ku-40g / l nobukhulu obuphansi ku-4g / l.
Umshini we-EPS Umshini Wokubumba we-EPS uqedile ngomzimba omkhulu womshini, ibhokisi lokulawula, uhlelo lwe-vacuum, uhlelo olunesisindo njll.
Izinzuzo ze-EPS Block Molding Machine
1.Machine wenziwe ephezulu amandla amashubhu sikwele kanye amapuleti ensimbi obukhulu;
2.Machine isebenzisa 5mm obukhulu aluminium umusi amapuleti nge Teflon enamathela. Futhi ngaphansi kwepuleti le-aluminium, izisekeli ezinkudlwana ezinamanani amaningi zibekwa ukugwema i-aluminium plate deform ngaphansi kwengcindezi ephezulu. Amapuleti e-Aluminium awashintshi ifomu ngemuva kweminyaka eyishumi esebenza;
Onke amapaneli ayisithupha kaMachine ngosizo lokushisa ukukhulula ukucindezela kwe-welding, ukuze amaphaneli angakwazi ukukhubazeka ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme;
4.Machine ngemigqa eminingi yomusi ukuqinisekisa ukuthi kushunqiswa ngisho nasemabhulokini, ngakho-ke ukuvimba i-fusion kungcono;
Amapuleti ama-5.Machine ane-drainage system engcono ngakho-ke amabhulokhi omiswe kakhulu futhi anganqunywa ngesikhathi esifushane;
6.All umshini amapuleti ngokusebenzisa nokugqwala ekususeni, ibhola sishaye ke wenze anti-ukugqwala base Umdwebo kanye ebusweni Umdwebo, ngakho umshini umzimba akulula ukuba ukugqwala;
7.Machine sebenzisa smart piping system and steaming process, ukuqinisekisa ukuhlangana okuhle kwamabhulokhi womabili ubukhulu obukhulu kanye nobukhulu obuphansi;
Uhlelo lokugcwalisa okusheshayo kanye nohlelo olusebenzayo lwe-vacuum luqinisekisa ukusebenza komshini ngokushesha, ibhulokhi ngayinye imizuzu engu-4 ~ 8;
I-9.Ejection ilawulwa yimpompo ye-hydraulic, ngakho-ke wonke ama-ejectors acindezela abuye ngejubane elifanayo;
Izingxenye ze-10.Most ezisetshenziswa emshinini zingeniswa noma imikhiqizo edumile enophawu.
Usayizi Womngundo Womngundo
2 `` (i-DN50)
I-6 '' (DN150)
Kg / umjikelezo
1.5 `` (i-DN40)
m³ / umjikelezo
Hlanza Amanzi Okupholisa
I-4 '' (DN100)
I-5 '' (DN125)
Phansi kwe-Steam Vent
Air Ukupholisa Vent
Umthamo 15kg / m³
Min / umjikelezo
Xhuma Umthwalo / Amandla
Langaphambilini Umshini wokupholisa wohlobo lwe-PB2000A-PB6000A womoya
Olandelayo: I-SPY90-SPY120 i-Exander eqhubekayo eqhubekayo
PB2000A-PB6000A Air Ukupholisa uhlobo block block udini ...
SPB2000A-SPB6000A EPS Uhlobo ashintshekayo Block Mol ...
Ikheli: Igumbi 1407-1408, No. 19 Jinping Road, Fuchun Street, Fuyang District, Hangzhou, Isifundazwe Zhejiang, China 311402